इवान को नाम को मूल
इवान - रूसी नाम हाम्रो देश र को देशहरूमा धेरै लोकप्रिय छ विदेश निकट। यसको वाहक फरक मान्छे साधारण मा ती सबै कुरा छन्, तर, तैपनि,। त्यसैले इवान को गोप्य नाम के हो? गरेको छानबिन गरौं।
इवान को नाम को मूल फिर्ता हिब्रू जरा जान्छ। सुरुमा यसलाई "Yohanan" जस्तै सुनिन्थ्यो र "कृपा परमेश्वरको", "परमेश्वरको उपहार" हो। त्यसपछि, नाम धेरै परिवर्तनहरू भइरहेको छ र सबै दुनिया भर भताभुंग: मा इङ्गल्याण्ड - यूहन्ना, जर्मनी - यूहन्ना र हंस, डेनमार्क - यांग, फ्रान्स - जीन, र रूस मा - पहिलो यूहन्ना र त्यसपछि जन।
यसरी, इवान र यसको महत्त्व को नाम को मूल हामीलाई स्पष्ट भए, र यो एक व्यक्तिको चरित्र कसरी असर गर्छ? Vanya किनभने यो एक धेरै विवादास्पद प्रकृति छ, वाक्य को एक जोडी वर्णन गर्न असम्भव छ। दया र आक्रमण, धूर्त र सरलता, कोमलता र क्रोध, खुलापन र संयम, बल र समस्याका: यस्तो मानिस मा विपरीत गुणहरू फिट।
"- मूर्ख इवान", "Roly-पाली" र धेरै अन्य Jokes दृढ रूसी मान्छे को मन मा entrenched: एक बच्चाको रूपमा, भ्यान धेरै jeers सहन थियो। र तपाईं आफ्नो मार्ग गरौं भने, यो एउटा बन्द, प्रतिशोधी मानिस बढ्न सक्छ। र इवान को स्वभाव दिइएको - विस्फोटक choleric, अपराधीहरूले unpunished रहने छैन। तसर्थ, एकदम अक्सर सानो Vanya एक हावी छ।
आमाबाबुले उहाँलाई रोचक क्रियाकलाप र सोख को एक ठूलो संख्या कैद गर्न, बच्चा को अवकाश गर्न विशेष ध्यान गर्नुपर्छ। यस मामला मा, त्यो विकसित भएको willpower तपाईं आफ्नो कल फेला पार्न र यसलाई आफ्नो सबै ऊर्जा (र यसको धेरै इवान) संलग्न मदत गर्नेछ र लगनशील भई लागिरहेमा र चासो व्यापक दायरा। यो पनि अवश्य, नाम को बोक्ने कुरा गर्न धेरै राम्रो छ भन्ने तथ्यलाई योगदान छ।
कैदी र आपराधिक अधिकारीहरूले गर्न सिपालु वैज्ञानिकहरू र लेखकहरूले देखि - यी subtleties वयस्क Ivanov को भाग्य फरक हुन सक्छ भन्ने तथ्यलाई द्वारा बताए छ। र नाम इवान, को मूल wherein एक दोहरी-उद्देश्य ( "परमेश्वरको उपहार" वा "परमेश्वरले दया छ"), हामीलाई अघि नयाँ प्रकाश मा देखिन्छ। तर कुनै पनि मामला मा, सबै Wani एक indisputable फाइदा छ - आफ्नो हृदयको चौडाई कुनै सीमा थाह छ। तिनीहरूले संचार, मूल्य मित्र को धेरै रुचाउनु र नातेदार को भाग्य मा रुचि छन्।
इवान पत्नी घर समय को अतिथि हुनेछ, र यो रमाइलो गर्न सिक्न तथ्यलाई स्वीकार गर्न राम्रो छ। तर पनि साथी Wani इश्कबाज प्राप्त छैन। उहाँले पनि डाह छैन हुनत, तर किनभने विस्फोटक प्रकृति को, राम्रो आधा यस्तो provocation प्रतिक्रिया गर्न सबैभन्दा अप्रत्याशित हुन सक्छ। तर, यो इवान आफूलाई मात्र एक महिला हेर्न भनेर होइन।
छोराछोरी संग खेल्दै उहाँले घरको (ज्यादातर पुरुष) गर्न रुचि, र लागत मा skimp छैन: Vani प्राप्त अद्भुत पति र पिता।
सिकर्मी, मिस्त्री, steelworker: इवान शारीरिक प्रयास आवश्यक थप उपयुक्त पेशा हो। नाम को बोक्ने उनको स्वास्थ्य नजिक ध्यान गर्नुपर्छ। यो रक्सी आशक्त हुन सक्छ पछि वर्ष मा, तपाईं विचार यो लिन र रक्सीको दुरुपयोग गर्न प्रयास गर्नुपर्छ।
त्यसैले अब तपाईं नाम इवान, यसको मूल्य को मूल, साथै तागत र यसको मालिक को कमजोरी थाहा छ। हामी यो जानकारी तपाईंलाई उपयोगी हुनेछ भन्ने आशा।
Babushkinskiy चिहान: प्राप्त गर्न कसरी विवरण
स्टेला नाम: मान, मूल रहस्य
सोमवार - एक कठिन दिन। किन कि भन्न?
बेबी मनिटर - ग्राहक समीक्षा। के सबै भन्दा राम्रो बच्चा मनिटर छ - र बेफाइदा
Windows मा सूर्य सुरक्षा फिलिम - गर्मी गर्मी लागि ठूलो
कसरी आफ्नै हातले सान्टा क्लाउस एक सुन्दर घर बनाउन
वर्ल्ड वाइड वेब के हो
आमा lactating लागि भिटामिन छनौट: जो राम्रो छ?
लेखा लागत को सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण प्रकार्य मध्ये एक उत्पादन लागत को लागी लेखांकन
बियर मा व्यवस्था। राष्ट्रलाई को स्वास्थ्य को लागि लडेको हुनुपर्छ